Izindawo ezihamba phambili zokuvakashela e-Indonesia! - I-LucidPix
Uyemukelwa kwelinye lamazwe amahle kakhulu eSouth East Asia! Kulesi sikhala sebhulogi, sikutshela ukuthi kungani lezi zindawo ezingcono kakhulu zokuvakashela e-Indonesia ngokudla okuningi okuhle, amasayithi omlando kanye namabhishi amaningi.
Mhlawumbe isiqhingi esihlotshaniswa kakhulu lapho abantu bezwa i- “Indonesia”, iBali ingenye yezindawo ezithandwa kakhulu izivakashi ezizungeze i-Asia. Cishe Base-Australia abayizigidi eziyi-1.1 uzovakashela lesi siqhingi kulo nyaka kuphela! Ngaphakathi kwesiqhingi, uzothola amathofi amaningi we-Aussie nezindawo zokudla ezisakhula futhi ezihlanganisa amasiko nokuklanywa kweBalinese njengale ndawo ebizwa ngokuthi le ndawo Izitsha zeNalu. I-Bali idume ngokushiswa yilanga okuhle kusihlwa esiqhingini futhi ungaba nenhlanhla yokugcoba indawo kuyo I-Rock Bar (ukubuka okungcono kakhulu kolwandle esiqhingini!). Bheka ngezansi ukuze uthole isibonelo sokubukwa okutholayo.
Idolobha elikhulu kunawo wonke e-Indonesia yiJakarta. Impela umehluko ekubukeni kwasolwandle kweBali, leli dolobha linhloko-dolobha yase-Indonesia futhi linabantu abaningi abangaphezu kwezigidi eziyi-9! Idolobha liyindawo enhle yokuhlola umlando wase-Indonesia ngokuvakashela iminyuziyamu yabo nezimpawu zomlando (hlola uhlu lwe-Top 7 Best Sights to See lapha). Ngenkathi uku-Jakarta, ungavakashela futhi izimakethe zabo zokudla zasemgwaqweni ngokudla okumnandi kodwa okungabizi kakhulu.
Lesi siqhingi cishe akunakwenzeka ukubona ebalazweni ngenxa yokuthi sincane kangakanani! Itholakala eduze kweBali, iNusa Penida iyindawo efanelekayo yokuya kulabo abafuna ukwehla kugridi, vala izingcingo zabo bese uthola ukuzola kwangempela. Abavakashi abaningi bazosuka eBali baye esiqhingini ngesikebhe esihamba cishe 90 imizuzu. Lokho okubonayo nalesi siqhingi yilokho okutholayo, ulwandle olucwebile olwandle, mhlawumbe ezinye izindawo zokudlela zasendaweni kanye namathuba amahle okubhudula!
Ngabe kukhona ukuqagela ukuthi lesi siqhingi sidume ngani? Yize kuyiqiniso impela uhambo lokufika (ukugibela indiza uye eBali, isikebhe noma ukugibela indiza uye eLabuan Bajo, futhi ekugcineni ukuhamba ngesikebhe uya eKomodo), lesi siqhingi siyasifanela. I-Komodo Island idume ngezakhamizi zayo zezingulule, i-Komodo Dragon aka yisidlakela esikhulu kunazo zonke emhlabeni! I-Komodo Island ilungele umgibeli. Futhi, thola kanye kokuhlangenwe nakho kwakho konke kokuvakashela kwabo Pink Beach, iphupho le-Instagram.
Wake waya kulezi zindawo e-Indonesia? Guqula izithombe zakho zokuhamba zibe yi-3D ngokusebenzisa iLucidPix futhi ungakhohlwa ukusifaka ithegi ithuba lokufakwa Instagram wethu!
Izikhathi Omkhulu Kunazo Zonke Umlando wama-Olimpiki Ku-3D →← Izibonelo eziyi-10 Zobuhlakani Bokuhlobisa Ezimpilweni Zethu Zansuku zonke